नेपाल आइडलमा ‘टप ५’ का लागि भिडन्त, आज कसले कुन गीत गाउने ? [भिडियाे] - Everest Dainik - News from Nepal
नेपाल आइडलमा ‘टप ५’ का लागि भिडन्त, आज कसले कुन गीत गाउने ? [भिडियाे]
लोकेश धामी, काठमाडौं । जारी ‘नेपाल आइडल सिजन २’ मा आज (बिहीबार) ‘टप ५’ मा पुग्नका लागि ६ प्रतिस्पर्धीबीच भिडन्त हुने भएको छ । यो भिडन्त गायनको हो । उनीहरु ‘उत्कृष्ट प्रस्तुति’ दिने तयारीका साथ मञ्चमा उत्रिदै छन् ।
एपीवान टेलिभिजनबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल आइडलमा कडा प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ । प्रतिस्पर्धीबीच मात्र होइन समर्थकबीच पनि भोटिङ प्रचारका लागि कडा प्रतिस्पर्धा नै चलेको देखिन्छ । उनीहरुले सामाजिक सञ्जालको सक्दो सदूपयोग गरिरहेका छन् ।
प्रतिस्पर्धीले आज दिएको प्रस्तुतिका आधारमा उनीहरुले भोट पाउने छन् । जोले कम भोट पायो उ नेपाल आइडलको ‘टप ५’ मा पुग्नबाट बञ्चित हुने छ । यसकारण सबै प्रतिस्पर्धीले ‘दमदार’ प्रस्तुति दिने तयारीका साथ बसिरहेका छन् । आजको अंकमा राष्ट्रिय भाव बोकेका गीत प्रस्तुत हुने छन् । सबै प्रतिस्पर्धीले बिहीबार ‘राष्ट्रि गीत’ गाउने छन् । आज कसले कुन गीत गाउने छन् ?
याे पनि पढ्नुस रविलाई जिताउन भारतमा प्रवासी नेपालीद्वारा प्रचार–प्रसारमा तिव्रता
रवि ओडः रविले यसअघि पनि ‘दमदार’ प्रस्तुती दिदैं स्रोतादर्शकको ध्यान आफ्रतिर तान्न् सफल भएका छन् । आज पनि उत्कृष्ट प्रस्तुती दिन उनी साँझ ८ः३० बजेको बेग्र प्रतिक्षामा छन् । यो बिहीबार रविले नारायण गोपालको आवाजमा रहेको ‘विरताको चिनो’ बोलको ‘राष्ट्रिय गीत’ गाउने छन् ।
पवन गीरिः उत्कृष्ट प्रस्तुती दिदै पवन यो स्थानसम्म पुग्न सफल भएका छन् । आज उनले ‘म मरे पनि मेरो देश बाँची रहोस्…’ बोलको गीत गाउने छन् ।
याे पनि पढ्नुस ‘गाल्डेन माइक’ विजेता सुमित आज यस्तो गीत गाउँदै [प्रोमोसहित]
बिक्रम बरालः बिक्रम नेपाल आइडलका मुख्य दाबेदार मानिएका छन् । स्रोतादर्शकको मन जित्न सफल बिक्रमले आज ‘मलाई प्यारो लाग्छ, मलाई राम्रो लाग्छ…’ बोलको गीत गाउने छन् । उनी नेपाल आइडलका ‘गोल्डेन माइक’ विजेतासमेत हुन् ।
अस्मिता अधिकारीः अस्मिता ‘नेपाल आइडल’ मा बाँकी रहेकी एक मात्र महिला प्रतिस्पर्धी हुन् । अघिल्लो साता नीलिमा थापा बाहिरिएपछि उनी आइडलमा एक मात्र महिला प्रतिस्पर्धी रहेकी हुन् । अहिलेसम्म उत्कृष्ट प्रस्तुती दिदै आएकी अस्मिताले बिहीबार पनि त्यही लय दोहोर्याउने आँकलन गरिएको छ । आजको अंकमा उनले ‘सय थरी बाजा एउटै ताल..’ बोलको गीत गाउने छिन् ।
याे पनि पढ्नुस करेन्ट दुर्घटनाः साना त्रुटिले कसरी निम्त्याउछ ठूला जोखिम र क्षति ?
सुमित पाठकः ‘नेपाल आइडल’ मा ‘गाल्डेन माइक’ पाउने मध्येका एक सुमित आइडलको उपाधिका मुख्य दाबेदार पनि हुन् । उनले विगत ‘एपिसोड’ मा पनि उत्कृष्ट प्रस्तुती दिएका थिए । आज सुमितले ‘म मरे पनि मेरो देशको माया छ..’ बोलको ‘राष्ट्रिय गीत’ गाउने छन् ।
अमित बरालः अमितले गाएका विगतका गीतले स्रोतादर्शकको मन बेस्सरी खिचेको छ । उनले कयौंका आँखा रसाउने मार्मिक गीत प्रस्तुत गरिसकेका छन् । आज अमितले ‘धेरै गर्नु छ स्वदेशको सेवा…’ बोलको गीतका साथ मञ्चमा प्रस्तुत हुने छन् ।
ट्याग्स: Amit Baral, asmita adhikari, Bikram Baral, Lekesh dhami, nepal idol, Pawan Giri, Ravi oad